Post-Modernism (Poem) – Part (1) | သင်ကာဘုန်းမြင့်-Thinker Bhone Myint
← They Never Said it (2)
They Never Said it (3) →
5 responses to “Post-Modernism (Poem) – Part (1)”
Post ခေတ်ပေါ်ကဗျာဗေဒ မှတ်စုများကို ကဗျာဆရာ ဇေယျာလင်း ရေးသားပါတယ်။ သူထုတ်ဝေထားတဲ့ L=A=N=G=U=A=G=E=P=O=E=T=R=Y နှင့် အခြားကဗျာဗေဒများ စာအုပ်မှာ စာမျက်နှာ ၁၂၉ မှ စာမျက်နှာ ၁၄၀ အထိ နောက်ဆုံးအပုဒ် ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား
ကျေးဇူးအထူးပါပဲ။ နောက်တစ်ပုဒ်မှာ ထည့်ရေးပေးလိုက်ပါမယ်။ ကျနော့်ဆီမှာ ရှိနေတာက အေဖိုးပေါ်မှာ စာအကြမ်းစီထားတဲ့ မိတ္တူတွေပဲ ဖြစ်နေလို့ ရေးသူနာမည် ပါမလာတာပါ။
I am visiting your home. so good. Nice post!
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်က ပထမဆုံးကောမန့်တစ်ခုအတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်း လာပြောတာပါ.. ဆီဘောက်စ်ရှာမတွေ့လို့ ဒီမှာပြောသွားရတာ ခွင့်လွှတ်ပါ..